INokia 3.1 isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
INokia 3.1 ifika ngokusemthethweni eSpain
Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo iNokia ithi thaca isizukulwane sayo esitsha esiphakathi, kunye neemodeli ezintathu eziboniswe kumsitho eRashiya. Enye yeefowuni ezintathu esidibene nazo kumsitho yayiyiNokia 3.1, esinokuyichaza njengeyona ilula kuzo zonke. Le modeli sele isungulwe ngokusesikweni eSpain. Ngale ndlela, ukwandiswa kweemodeli zenkampani kwilizwe lethu kuyandiswa.
INokia 3.1 kukuhlaziywa kweNokia 3, eyasungulwa kunyaka ophelileyo ekubuyiseni uphawu kwintengiso. Ke sinotshintsho ngokweenkcukacha kunye noyilo. Imodeli ekumgangatho ophakathi ofikelelekayo, esele ithengiwe eSpain.
I-brand yazisa ukuba ifowuni yayiza kuqala ukufikelela kwezinye iimarike ngoJulayi, kwaye uthobele. Kuba sele yenziwe yafunyanwa kubasebenzisi eSpain. Intengiso apho inkampani ibisoloko ifumana ukuthandwa ngokuhamba kwexesha.
INokia 3.1 ifika eSpain kwiinguqulelo ezimbini ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Inguqulelo yokuqala yefowuni ine-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina kwangaphakathi. Ngelixa enye ine-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina kwangaphakathi. Ke unokukhetha eyona ikulungele kakhulu.
Ngokubhekisele kumaxabiso, eyona nguqulelo ilula yeNokia 3.1 ine ixabiso le-139 euros. Inguqulelo ephezulu yoluhlu oluphakathi ibiza kancinci, ukuba ngamaxabiso ayo 149 euro. Ukusuka kwinto onokubona ukuba ezi nguqulelo zimbini zesixhobo ziyafikeleleka ngokwexabiso.
Iyafumaneka kwintengiso kuyo yonke indibaniselwano yemibala ezazisiwe ngokusemthethweni. Ke ngoko, sinenguqulo ngombala omnyama / wobhedu, enye ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka / ubhedu kwaye eyesithathu ngombala omhlophe / ngentsimbi. Ke uya kuba nakho ukukhetha uguqulelo lweNokia 3.1 oyithanda kakhulu kunazo zonke. Ucinga ntoni ngolu luhlu luphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 3.1 ifika ngokusemthethweni eSpain
Lingisa uTony Hawk ngebhodi yesikeyiti kwi-Epic Skater 2
Yenza uyilo olubonakalayo kunye nemizobo evela kwiselfowuni yakho nge-Canva